ရိုးသားတဲ့ အိမ်ရှင်တွေ ဒီအိမ်ဖော်တွေရဲ့ ဂျင်းထည့်မခံရဖို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် - Uptodate MM
ရိုးသားတဲ့ အိမ်ရှင်တွေ ဒီအိမ်ဖော်တွေရဲ့ ဂျင်းထည့်မခံရဖို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်
Uptodate MM | May 15, 2019 | သတင်း | No Comments
သူ့ကိုမုဒိန်းကျင့်လို့ပြန်လာတာပါဆိုတဲ့ ဒီလိုကလိမ်ကကျစ်အိမ်ဖော်များရန်မှ ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ
အိမ်ဖော်ခေါ်တဲ့အိမ်များသတိထားရှောင်နိုင်အောင်လို့တင်ပေးတာပါ။ ပုံထဲကလူတွေဆိုလုံးဝမခေါ်ပါနဲ့လို့စေတနာနဲ့သတိပေးချင်ပါတယ်။ (ပုံကသူများရိုက်ပို့ပေးတာဆိုတော့နည်းနည်းဝါးနေတယ်) အနီနဲ့ဝိုင်းထားသူတွေကအိမ်ဖော်တွေပါ(အမည် သက်သက်ဝင်းနဲ့သန္တာပါ။ အေါ်နဲ့တူမတော်ပါတယ်အဲ့နှစ်ယောက်က)။
အိမ်မဲမြို့နားက ဗိုလ်ဝင်းဆိပ်ရွာကပါ။ ပထမတယောက် အကျီအဖြူနဲ့တယာက်က(အမည်-သက်သက်ဝင်း) အိမ်ရှင်ဆီမှာ အကြောင်းပြချက်ပေါင်းစုံနဲ့အသနားခံ ကတိတွေအစုံပေးပြီးလစာတွေအများကြီးကြိုထုတ်ပါတယ် ကျမတို့ဆီမှာခုချိန်ထိ၆လစာလောက်ကျန်နေပါသေးတယ်။
လစာကိုတော့စာချုပ်နဲ့အသိသက်သေတွေနဲ့လက်မှတ်ထိုးပြီးထုတ်ပေးထားတာမို့တော်ပါသေးတယ်။ လစာတွေကြိုထုတ်ပီးထဲကအိမ်ကအဖေနေမကောင်းလို့အမေနေမကောင်းလို့ ကလေးနေမကောင်းလို့ခဏပြန်လာပါလို့သူ့အိမ်ကခဏခဏပြန်ခေါ်ပါတယ်။ ကျမတို့ကလုံးဝပြန်မလွှတ်ပါဘူး။
ခုနောက်ဆုံးတခါကျသူ့၂နှစ်အရွယ်သားကအိမ်မဲဆေးရုံမှာအသည်းအသန်ဖြစ်နေလို့ပါဆိုလို့ပြန်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။ အလွန်ဆုံးတပတ်ဆိုပြီး ပြန်ခွင့်ပြုလိုက်တော့နှစ်ပတ်နီးပါးကြာပြန်သွားပါတယ်။ပြန်လာတော့လဲဆေးကုစရိတ်အကြွေးတင်လာလို့ပိုက်ဆံထပ်ထုတ်ချင်တယ်ပြောပြီးအကြွေးရှင်ဆိုတဲ့မိန်းမတယောက်ကိုပါအိမ်ထဲခေါ်သွင်းလာပါတယ်။
သူ့အကြွေးရှင်ကလဲပိုက်ဆံမရရင်လုံးဝမပြန်ပါဘူး။ ကိုယ်တွေကဒါဆိုပိုက်ဆံထပ်ထုတ်ပေးမယ် ဒါပေမဲ့တရားရုံးမှာအသိသက်သေတွေရှေ့မှာ လစာမကျေမချင်းဘာအကြောင်းကြောင့်မှမပြန်ပါဘူးလို့လက်မှတ်ထိုးရမယ်ဆိုတော့လဲလုံးဝမထိုးပါဘူး။ အိမ်သားတွေကမကျန်းမာရင်တော့ပြန်ရမှာပဲပြောပါတယ်
(လစာလဲအများကြီးကြိုထုတ်ချင်သေး အိမ်သားတွေနေမကောင်းလဲပြန်ချင်သေးတယ်။ တအိမ်လုံးကလဲလူမမာတွေချည်းပါသူတို့ပြောပုံအရဆို) ကိုယ့်ဆီကပိုက်ဆံမရရင်အိမ်မဲကသူ့ဦးလေးဆီမှာလစာပိုရတယ် သွားလုပ်ပြီးကျမတို့ကိုပြန်ပေးဖို့ကျန်နေတဲ့၆လစာပိုက်ဆံကိုနောက်နှစ်လကြာရင်အရစ်ကျနဲ့ပြန်ဆပ်မယ်ပြောပါတယ်။
ကျမတို့ကလဲဒီအိမ်ဖော်တွေကအရမ်းဇယားနောက်လို့လစာကျေတဲ့ထိဆက်လုပ်မယ်ဆိုတောင်လက်မခံတော့ပါဘူး။ ကျန်တဲ့လစာတွေပဲတလုံးတခဲပြန်အမ်းခိုင်းလိုက်တယ် မအမ်းနိုင်ရင်လိမ်လည်မှုနဲ့အမှုဖွင့်မယ်ပြောလိုက်တယ်။(အသေးစိတ်ပြောရင်အရမ်းရှည်သွားမှာစိုးလို့)
နောက်ဆုံးသူ့ကိုအလုပ်ခေါ်တဲ့သူ့ဦးလေးဆိုသူနဲ့ညှိရင်းနဲ့ဒီလကုန်ဦးလေးဖြစ်သူက ကျမတို့ကို၆လစာလုံးငွေပြန်ပေးပြီးမှအဲ့ကောင်မလေးကိုပြန်လွှတ်ပါဆိုပြီးပြေလည်သွားပါတယ်။ လစာအမ်းတဲ့ကိစ္စပြေလည်ပြန်တော့သူခေါ်လာတဲ့အကြွေးရှင်မိန်းမကိုပြန်လိုက်ပို့ရမှာမို့လို့ဆိုပြီးခွင့်တရက်နဲ့လမ်းစရိတ်ထပ်တောင်းပါတယ်။
အလိမ်အညာဆင်ခြေကတော့အကြွေးရှင်မိန်းမကနှလုံးရောဂါနဲ့မို့လမ်းမှာတခုခုဖြစ်မှာစိုးလို့ပါတဲ့။ ကျမတို့ကလမ်းစရိတ်လုံးဝထုတ်မပေးတော့သူ့ဟာသူရှာကြံပြန်ပို့မယ်ဆိုပြီးလမ်းထိပ်မှာတွေ့သမျှလူတွေကို အိမ်ရှင်တွေကထမင်းမကျွေးကြောင်း ခုအိမ်ပြန်ဖို့လမ်းစရိတ်တောင်မပေးကြောင်း မူယာမာယာမျိုးစုံသုံးလိမ်လည်ပိုက်ဆံတောင်းပြီးပြန်သွားပါတယ်။
(လမ်းထိပ်ကဆိုင်တွေကကိုယ့်အိမ်နဲ့သိနေလို့ပြန်ပြောပြတာ) တရားရုံးမှာအမှုဖွင့်ပြီးပြီမို့နောက်တရက်မှာသူပြောတဲ့အတိုင်းပြန်မလာလဲနေပစေဆိုပြီးပြန်ခိုင်းလိုက်တာ။ အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်သူ့အကြွေးရှင်ကိုပါအိမ်မှာခေါ်တင်ကျွေးထားရမဲ့ပုံ။ နောက်တယောက်သန္တာကအဲ့လိုပါပဲ ကျမတို့ကို၇၀၀၀လောက်ပဲပြန်အမ်းဖို့လိုတာမို့ဒီတိုင်းပြန်လွှတ်လိုက်တာပါ။
သူတို့ဘက်ကပြန်အမ်းဖို့ကျန်တာတောင်ပြန်ဖို့လမ်းစရိတ်မရှိလို့ဆိုပြီးထပ်တောင်းနေပါသေးတယ် အရှက်မရှိပုံများ :/ သူ့သမီးကိုပြန်လာခေါ်တော့ချက်ချင်းမခေါ်သွားပဲနှစ်ညအိပ်သွားပါသေးတယ်။ကလိမ်ကကျစ်တွေဆိုအိမ်ကအမေကသိပ်အားနာတယ်။
နောက်ထပ်တညထပ်အိပ်မယ်လုပ်နေလို့ လုံးဝသီးမခံနိုင်တော့လို့ကျမကိုယ်တိုင်ရန်ကုန်ကနေဖုန်းလှမ်းဆက်ပြီးအိမ်ရိပ်တောင်လာမနင်းနဲ့ ခုချက်ချင်းထွက်သွားကြလို့ပြောလို့ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားအိပ်ရင်းအိမ်ရှင်မကောင်းကြောင်းသတင်းလွှင့်သွားကြပါသေးတယ်။
သူ့အမေကတချိန်လုံးဖုန်းဆက်လစာတွေတောင်းနေတာပါ။ အရင်အိမ်တွေမှာလဲလစာမကျေပဲအတင်းပြသနာရှာပြီးပြန်ခေါ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းကြားပါတယ် သူ့အဒေါ်ဖြစ်သူသက်သက်ဝင်းကိုယ်တိုင်ကလဲပြောပါတယ်။ အိမ်ရှင်ဆီကအမျိုးမျိုးပိုက်ဆံတောင်း ပိုက်ဆံရရင်အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြအိမ်ပြန်ပြီး ပြန်လာပြန်တော့လဲသူတို့ရှိသမျှအကြွေးပါအိမ်ရှင်ကိုဆပ်ခိုင်းတတ်တဲ့ အိမ်တကာလှည့်ပြီးဒီလိုကလိမ်ကကျစ်ကျလိမ်ညာစားသောက်တတ်တဲ့သူမျိုးတွေမို့ အိမ်ရှင်ချင်းကိုယ်ချင်းစာပြီးဝေးဝေးရှောင်နိုင်အောင်တင်ပေးလိုက်တာပါ။
သက်သက်ဝင်းအမတယောက်လဲရန်ကုန်ကကျမသူငယ်ချင်းအိမ်မှာအလုပ်သွားလုပ်ပြီးလစာတွေကြိုထုတ်ပြီးအဖေနေမကောင်းလို့ခဏပြန်ပါရစေဆိုပြီးလစာတွေလဲပြန်မအမ်း အလုပ်လဲပြန်မလုပ်တဲ့အပြင် ကျမသူငယ်ချင်းရဲ့အမျိုးသားကသူ့ကိုမုဒိန်းကျင့်လို့ပြန်လာတာပါဆ်ုပြီးတော့ရွာမှာသတင်းပြန်လွှင့်ပါတယ်။ အင်မတန်ကိုယုတ်မာကောက်ကျစ်တဲ့သူတွေပါ တမျိုးလုံးကိုယုတ်တာပါ။ ကလိမ်ကကျစ်အိမ်ဖော်များရန်မှကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေရှင်။
(၄) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ ထီပေါက်စဉ် တိုက်ရန်
ဖုန်းကိုင်ခွင့်မရှိ အပြင်ထွက်ခွင့် မရှိတဲ့ မြန်​မာနို​ငံရဲ့ အကြီးမားဆုံး သီလရှင်​ စာသင်​တိုက်
ဖားကန့်တွင်နွံကန်ကျိုးပေါက်ပြိုကျမှုကြောင့် သေဆုံးသွားသူ တစ်​​ယောက်​ကို သိန်း ၃၀၀ ရာကျပ်​စီ နစ်​နာ​ကြေး​ပေးဟုသိရ…..
ညီမလေးရေ ဆိုးဝါးလှတဲ့ ဘဝကံကြမ္မာ ကို ရင်ဆိုင်ရင်း မိဘကို လုပ်ကြွေးနေသော အာဂ ကောင်မလေး
ထီပေါက်တော့မယ်ဆို နိမိတ်ပြ လေ့ရှိတဲ့ အိမ်မက်အချို့ . . .
မလေအတှကျ မီတာခ ယူနဈ ၁၅၀အထိ အခမဲ့သုံးခှငျ့ ထပျပေးမညျ . . .
ဆီးဖြူသီးလေးတွေ ရတတ်ရင် သိမ်းထားပါ . . .
ထိုင်းနိုင်ငံမှ နာနတ်သီးများသည် ကျောက်ကပ်နှင့် အသည်းကိုပျက်စီးစေနိုင်သော ဓာတုပစ္စည်းများပါဝင်ကြောင်း တွေ့ရှိ . . .
သန့် ရှင်းေ ရး ဝန် ထမ်း ဘဝ က နေ တက် မှာ မ ဟုတ် ဘူး ..လို့ ချစ် သူ ရဲ့အနှိ မ် ခံ ခဲ့ ရ ဖူး တဲ့ သူဌေးကြီး
ကို ရိုနာဗိုင်းရပ် စ်နှင့် ပတ် သ က်ပြီး ဘယ်လ်ဂျီ ယံ ဆ ရာ ဝန် (၁) ဦး က လူ ငယ်ေ တွ ကို သ တိပေး
© 2020 Uptodate MM.